Wɔanya Biribi a Ɛkyɛn Buronya
KRISTOFO mpempem pii nni Buronya. Wɔte nka dɛn wɔ Buronya a wonni no ho? So wɔahwere biribi? Wɔn mma nso te nka sɛ wɔde biribi akame wɔn anaa? Yɛnhwɛ nea Yehowa Adansefo a wɔwɔ aman pii so aka wɔ asɛm no ho.
Wɔkae Yesu Kristo: “Memmɛyɛɛ Yehowa Dansefo no, na mentaa nkɔ asɔre. Sɛ mɛkɔ asɔre a, na ɛyɛ Buronya anaa Ester bere. Sɛ mekɔ asɔre saa bere no mpo a, na m’adwene nhyɛ da nkɔ Yesu Kristo so. Magyae Buronyadi nanso nnawɔtwe biara mekɔ Kristofo nhyiam mprenu, na afei nso mekyerɛ nkurɔfo nea Bible ka fa Yesu ho mpo!”—EVE, AUSTRALIA.
Adekyɛ mu anigye: “Sɛ obi kyɛ me ade bere a m’ani nna so a, etumi yɛ me dɛ paa. Akyɛde a ɛte saa na mepɛ! Metaa kyerɛw krataa yɛ mfonini wɔ so kɔma afoforo, efisɛ ɛma wɔn ani gye, na ɛma me nso m’ani gye.”—REUBEN, NORTHERN IRELAND.
Wɔboa ahiafo: “Yɛn ani gye ho sɛ yɛbɛyɛ aduan ama ayarefo. Ɛtɔ da a yɛkɔkyɛ wɔn nhwiren anaa keeki anaasɛ yɛkɔma wɔn akyɛde ketewa bi de hyɛ wɔn nkuran. Yɛn ani gye ho saa efisɛ yetumi kɔ saafo no hɔ bere biara wɔ afe no mu.”—EMILY, AUSTRALIA.
Wɔne abusuafo hyia: “Sɛ yehyia yɛn abusuafo a, ahopere biara nnim, enti ɛma yɛn mma no hu wɔn wɔfanom, wɔn sewanom, wɔn nananom, ne wɔn nuanom afoforo. Esiane sɛ yɛnsrasra abusuafo no afahyɛ bere pɔtee bi nti, yɛnte nka sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔsra wɔn, na wɔn nso hu sɛ yɛdɔ wɔn nti na yɛsrasra wɔn no.”—WENDY, CAYMAN ISLANDS.
Asomdwoe: “Edu Buronya bere a, nkurɔfo twa wɔn ho saa ara, enti wɔntaa nnwen asomdwoe ho koraa. Mabehu daakye ho bɔhyɛ a ɛwɔ Bible mu no, enti minsuro. Mabehu sɛ me mma benya anigye daakye.”—SANDRA, SPAIN.
Buronya Mu Ahosɛpɛw No—Wɔanya Biribi a Ɛkyɛn Buronya